Otu esi etinye Linux Kernel 5.14 na Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
October 13, 2021 October 4, 2021 by Jọshụa James
Nhọrọ mbụ iji wụnye kernel Linux 5.14 bụ ịwụnye ya ppa: tuxinvader/lts-mainline by TuxInvader. Nke a nwere ụfọdụ kernel 5.14 kachasị ọhụrụ na-ewulite ma na-emelite ya mgbe niile. Ihe ndọghachi azụ bụ nke a bụ PPA a na-atụkwasịghị obi, ma nyere akụkọ ihe mere eme nke PPA, ọ dị mma dị ka onye ọ bụla ọzọ a ma ama iji wụnye ma nye ya kernel ule; ị gaghị etinye nke a na sistemụ nwere mmetụta ma ọ bụ mmepụta ihe ọ bụla.
N'ime nkuzi a, ị mụtala otu esi etinye kernel 5.14 kacha ọhụrụ na sistemụ Ubuntu 20.04 gị; Enwere ike iji otu ihe ahụ na ụdị ọhụrụ 21.04 na 21.10. Rịba ama, ọ bụrụ na sistemụ gị bụ ihe nkesa na-emepụta ihe, a ga-adụ ọdụ ka ị jiri kernel dị na Ubuntu na-ebu ụgbọ mmiri ma ọ bụ jiri ụdị HWE maka nkwụsi ike. Agbanyeghị, maka ndị na-achọ ịnwale kernel 5.14, ị nwere ike ịghaghachi azụ na kernel gara aga n'ụzọ dị mfe na menu buut, yabụ ịnwale ya abụghị echiche ọjọọ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị nwetara ngwaike ọhụrụ nke anaghị akwado ya. kernel ngwugwu nke ndabara.